Fiteny soedoà - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fiteny soedoa)
Ny fiteny soedoà (amin' ny teny soedoà: svenska ) dia fiteny jermanika tenenina any avaratr' i Eorôpa. Ny isan' ny olona miteny io fiteny io dia folo tapitrisa; ny ankabeazan' ny mpiteny soedoà dia any Soeda ary misy fianakaviam-be vitsivitsy any Finlandy, ireo firenena ireo mampiasa ny fiteny soedoà ho teny ôfisialy.
Ny fiparitahan'ny olona miteny soedoa
Ny fiteny soedoà dia fiteny mitovitovy endrika amin' ny fiteny nôrveziana sy ny fiteny danoà, ary mety mifankahazo ny olona miteny amin' ireo teny telo ireo. Ny anton' ny fifankahazoana eo amin' ny mpiteny soedoà sy danoà ary nôrveziana dia noho ire pfiteny ireo samy avy amin'ny fiteny nôrsa taloha, fiteny tenenin' ny vahoaka jermanika tany Skandinavia nandritry ny andron' ny Viking.
Ny fiteny soedoà tsotra, tenenin' ny ankabeazan' ny olom-pirenena soedoà, dia tenim-pirenena avy amin' ny endrika maromaron' ny fiteny soedoà notenenina tao amin' ny faritra afovoany tamin' ny taonjato faha-19 hatramin' ny fanombohan' ny taonjato faha-20. Ny fiteny soedoà soratana dia iray ihany, fa ny fiteny soedoà tenenina dia arakaraky ny faritra isiana. Ny endrilky ny fiteny soedoà sasantsasany dia mety samihafa be amin' ny fiteny soedoà tsotra na amin' ny lafin' ny fitsipi-pitenenana na amin' ny lafin' ny voambolana ampiasaina, ary mety tsy mifanitsy amin' ny fiteny soedoà tsotra izy. Ireo fiteny sarotra azo ireo dia voafetra amina faritra any ambanivohitra ary vitsivitsy ihany ny isan' ny olona miteny azy. Ankehitriny ny ankabeazan' ny fitenim-paritra dia mitady ho very ka amporisihin' ny governemanta sy ny fahefana ny soedoà hitenenana ny fitenim-paritra.
Ny rafitry ny fehezanteny dia Mpanao-Matoanteny-Fameno, fa mety ovaovaina izy arakaraky ny teny ampiasaina sy ny fehezanteny; mitovitovy amin' ny teny anglisy ny endriky ny fiteny soedoà, fa betsabetsaka kokoa noho ny teny anglisy ny fiovan' ny teny. Misy karazan-teny roa, tsy misy fiovana ara-pitsipi-pitenenana, misy fiovan-teny arak' isa (nombre). Betsaka ny isan' ny zanapeo amin' ny fiteny soedoà ary matetika izy ireo mifanakaiky.
1.1 Ny fiteny norsa taloha
1.2 Ny fiteny soedoa taloha
1.3 Ny fiteny soedoa ankehitriny
2 Fizarana jeografika
2.1 Sata ofisialy
3.1 Fiteny soedoa tsotra
3.2 Soedoa any Finlandy
7.1.1 Miteny anglisy
7.1.1.2 Increase vocabulary
Tamin' ny taonjato faha-9, ny fiteny nôrsa taloha dia lasa nipoiran' ny fiteny nôrsa andrefana (Islandy, Nôrvezy) sy atsinanana (Soeda, Danemarka). Tamin' ny taonjato faha-12, niova ho lasa samihafa ny fiteny nôrsa notenenina any Danemarka sy any Soeda, ny anaran' ny fiteny tenenina amin' ireo faritra ireo dia fiteny danoà taloha sy fiteny soedoà taloha. Ny fiteny nôrsa rehetra isan-karazany dia voaanjadin' ny fiteny jermana ambany nandritry ny taonjato faha-13 hatramin' ny taonjato faha-16.
Ny fiteny norsa talohaHanova
Tamin' ny taonjato faha-8, ny fiteny jermanika niraisana tao Skandinavia, atao hoe fiteny prôtô-nôrsa, dia niova endrika ho lasa fiteny nôrsa taloha. Io fiteny vaovao mbola iraisan' ny mponina skandinaviana io dia mbola niova toetra fa tsy manerana ny Skandinavia, ny vokatr' io fiovana an-toerana io dia mampipoitra fiteny roa mifanakaiky: ny fiteny nôrsa taloha andrefana (tenenina any Nôrvezy sy any Islandy) ary ny fiteny nôrsa taloha atsinanana (tenenina any Soeda sy any Danemarka).
Ny fiteny soedoa talohaHanova
Ny teny hoe « fiteny soedoa taloha » dia teny ampiasaina mba hanoro ny fiteny soedoa notenenina tamin'ny fanombohan'ny taonjato faha telo ambin'ny folo (1225). Ao amin'ny taratasy manan-danja indrindra nosoratana tamin'ny abidy latina dia ny lalàm-paritany, ny Västgöta na ny Västgötalagen, nahitana singan-taratasy nosoratana tamin'ny 1250.
Ny fiangonana katolika romana tamin'izany fotoana izany dia nampiditra teny maro avy amin'ny fiteny latina tao amin'ny fiteny soedoa.
Ny fiteny soedoa ankehitrinyHanova
Fiteny soedoa tsotraHanova
Soedoa any FinlandyHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_soedoà&oldid=1000893"
Dernière modification le 29 Janoary 2021, à 10:29
Voaova farany tamin'ny 29 Janoary 2021 amin'ny 10:29 ity pejy ity.